नाटक/एकाङ्की – Page3– मझेरी डट कम
बिचार १ – नहुने काम भयो !
बिचार २ – कस्तो काम ? कस्तो नहुने काम ?
बिचार १ – नसोचेको काम, हित बिपरीतको काम, लापर्बाहीको, सत्य लिलामीको काम !
by Dinesh Dinglali
— दिंग्लाली कान्छो
— बिराटनगर – ४, नेपाल
प्रेमी-प्रेयसी, हामी हाम्रो हनिमून चन्द्रमामा यसरी मनाइरहेछौँ । हामी भर्खरै चन्द्रमामा अवतरित रकेटबाट ओर्लिएका छौँ ।
सूत्रधारः- त दर्शकवृन्द ! आज मबाट ठूलो गल्ती भएको छ । त्यसका लागि मलाई क्षमा गर्नुहोला । तपाईंहरू सबै नाटक हेर्न आउनु भएको छ र म नाटक देखाइहाल्न नसक्ने भएको छु । प्राविधिक गडबडीहरू छन् । माफ पाउँ दर्शकवृन्द ! माफ पाउँ । (झुकेर प्रमाण गर्छ । दर्शकदीर्घाबाट हल्लाखल्ला आउँछ ।) शान्त ! दर्शकवृन्द, शान्त । यौटा खुसीको खबर छ । नाटक सुरू नहुञ्जेलसम्म हामी तपाईंहरूलाई एउटा जीवनको विज्ञापन देखाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने छौँ । जीवन आहाहा ऽऽऽऽऽऽऽ सुन्दर शान्त जीवन !
आऊ नाटक खेलौँ !
(मञ्चमा केही विद्यार्थीहरू गोलो घेरा बनाएर उभिएका हुन्छन् । स्वागत, सम्पदा, श्रेया, आरिफ, बिनिता, आकार, सनीर, दावा सबैजना ध्यानमग्न देखिन्छन् । उनीहरू सबैले एक-अर्काका हात समातेका छन् । सबैले आँखा बन्द गरेका छन् । नाटकका निर्देशक बालक स्वागत र नाटककार बालिका सम्पदाको आँखा भने खुल्लै हुन्छ । उनीहरू सबैजनाले बाघ, भालु, हात्ती, सिंह, दुम्सी, खरायो, कछुवा, गैँडा, स्याल, मयुर आदिका भेषभुषा लगाएका हुन्छन् ।)
पात्रहरू :- करिव १२, १३ वर्षका बालबालिकाहरू —(१) विनोद, (२) कृष्ण, (३) लक्ष्मी, (४) रञ्जु
(मञ्च दुई भागमा विभक्त छ । एक भागमा केही रुख र बुट्टाबुट्टी छन्, मौरीको घार छ । चराहरू स्वतन्त्ररूपले रुखका हाँगामा रमाइरहेका छन् । छत्तीस वर्ष उमेर भएको अशोक हातमा गुलेली र काँधमा झोला भिरेर चरा मार्ने ध्याउन्नमा यताउती गरिरहेको देखिन्छ । मञ्चको अर्को भागमा चार जना राधा, ज्ञानिता, मनोज र हरिश नाम गरेका दशबाह्र बर्षका केटाकेटीहरू खेलिरहेका देखिन्छन् । केही बेरमै उनीहरू कोलाहल शब्दका साथ एकअर्कामा हात हालाहाल गर्न थाल्छन् । लुगासुगा च्यातच्युत हुन्छ । त्यत्तिकैमा अशोक रिसले मुर्मुरिँदै आउँछ र उनीहरूलाई भकुर्न थाल्छ ।)
अशोक ः तिमीहरू अरूको पेटमारा रहेछौ । तिमरूको हल्लाले मेरा सिकार उडे ।
राधा ः (रुञ्चे मुहार पार्दै) विराउनु केही छैन । झगडा हामी बीचको हो । किन कुट्नु भयो ?
ज्ञानिता ः नविराउनु नडराउनु । हामीले कसैको पेटमारेका छैनौँ ।
मनोज ः (गाला सुम्सुम्याउँदै) यो सार्वजनिक ठाउँमा बसेर हल्ला गर्दा पनि पिटाइ खानु हामी माथि गरेको अत्याचार हो ।
अशोक ः (कुट्न झम्टिदै) अझै पुगेन । हल्ला गर्छौ ? सबका मुखमा ताला लगाई दिन्छु । बातले नमाने लातको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ । विना कुटाइले शान्ति नै आएन है ।
लाल सूर्य उदाइरहेछ
अमृत :- यो सैनिक पोशाक लगाउन पाइएको छ जनसेना कहलाउन भेट्टाइएको छ । कहिले सम्मानजनक भविष्य देख्छु कहिले गद्दार घोषणा भइएलाकी भन्ने त्रास बोक्छु । आखिरमा न उँभो न उँधोको जीवन विताइरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ ।
अनमोल :- के गर्ने र जीवन हत्केलामा लिएर लडिएकै हो । निरंकुशताका मतियारहरूलाई, जनहत्याराहरूलाई पाखा लगाएकै हो । व्यक्तिगत जीवनलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रिय हितमा जीवन अर्पेकै हो र पनि यो क्यान्टोनमेन्ट नामक जेलभित्र कैद भएर बसिराख्नुपर्ला कि जस्तो भएको छ ।
आस्था :- घरपरिवारको माया ममतालाई बिर्सेर निमुखा वर्गको हकअधिकार ठूलो ठानेर युद्धमोर्चामा समाहित भइयो । यत्रो रगतको खोलो उरालियो यत्रो कहरको समुद्र तयार भयो । यस्तो अवस्था जानी-जानीकन किन आखिरमा राज्यले हामीलाई किन सौताका छोराछोरीका रुपमा हेर्दछ ? मेरो मनले त आफैँलाई भन्छ- आगो ओकल्न जानेको छस् आगो पचाउन पनि जानेको छस् । सामन्तको सातो उडाउन पनि सिकेको छस् । विकृतिको भण्डाफोर गर्ने प्रशिक्षण पनि पाएको छस् । दबेर नबस् तँ निकै माथि छस् । गुम्सेर नबस् तैँले नै नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्छस् ।
“एक इन्डीयनसंगको भेट”
आज बिहानको कुरा हो मेरो इम्प्लोवेर र म होस्पिटल बाट फर्किंदै थियौ बाटोमा थकाई लाग्यो एक हरियो यत्र तत्र मनिस बस्ने सुन्दर गार्डन आइ पुग्यो त्यहाँ एक जना इन्डियन केटा ब्रेंच्मा र बुढो मानिस चाहिं व्हिल चियरमा मानौ त्यहाँ इम्प्लोवेर र वोर्कर्स दुई जना बसेको रहेछन मेरो इम्प्लोवेर र म संगै तीन जना अट्ने ब्रेंच्मा… Read More »“एक इन्डीयनसंगको भेट”
पात्रहरू: १, २, ३ कुर्सी खोज्ने पात्र २ चाहिँ नारी र अरू पुरुष पात्र ४, ५ जनता पात्र
(ठूलो कुर्सी छ । बैठक कोठाको दृष्य छ ।)
१ – (कुर्सी देखाउँदै) यो मेरो भागमा पर्छ मसँग यी समस्या निर्मूलको अचुक ओखती छ केवल सय दिन बस्न दिनुस् ।
२ – आजसम्म लिनु भो अब नारीको भागमा हुनुपर्छ ।
३ – यसको लायक त म हुँ मसँग दक्षिणेको साथ छ सात समुद्रपारिको समर्थन छ । अब सबको समर्थन मलाई हुनुपर्छ ।
१ – मसँग पनि छ, केवल १०० दिन बस्नदिनुस् । सारालाई रिझाउँछु ।
२ – मसँग पनि छ, केवल १०० दिन बस्नदिनुस् । म काम गरेर देखाइदिन्छु ।
नेपथ्य – आखिरमा समर्थन सबसँग छ सबलाई कुर्सी चाहिएको छ यसैमा खुशी लुकेको छ, फुर्ती अडेको छ । हो, कुर्सीका अगाडि देश छैन, जनता चाहिँदैन ।